အဝလွန်မှုရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ကင်ဆာအမျိုးအစားများ - Hello Sayarwon
ဝလို့ လှလို့ပဲ ရှိတယ်ဆိုပြီး ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ ပြောနေတုန်းလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ဒီအယူအဆကို ပြင်ဆင်ဖို့ လိုပါပြီ။ အကြောင်းကတော့ ဝတိုင်း မလှပါဘူး။ ရှိသင့်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ထက် များနေမယ်ဆိုရင် အဝလွန်လာမယ်။
အဝလွန်တာရဲ့ နောက်ဆက်တွဲမှာ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ ရှိလာမယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာမယ့် ကင်ဆာလည်း ပါတယ်။ ဒီတော့ အဝလွန်ရင် ဘယ်လို ကင်ဆာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကို ဒီဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
အဝလွန်တာနဲ့ ကင်ဆာ ဆက်စပ်မှုရှိလား ?
ကင်ဆာ အများစုက အဝလွန်ခြင်းကနေ အရင်းခံလာတာ များပါတယ်။ လေ့လာမှု အချက်အလက် အများစုအရ အဝလွန်တာဟာ နောက်ပိုင်းမှာ ကင်ဆာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
အဝလွန်တဲ့သူတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အဆီများသလို ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကလည်း ပိုများပါတယ်။ ဒီလို ဖြစ်နိုင်ခြေ များတဲ့အထဲမှာ အခုလို ကင်ဆာတွေလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။
အဝလွန်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ၊ ရှိသင့်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ထက် ပိုများနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ပုံမှန် ကိုယ်အလေးချိန် ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေထက် သားအိမ်အတွင်းနံရံမှာဖြစ်တဲ့ သားအိမ်ကင်ဆာ ခံစားရနိုင်ခြေက ပုံမှန်ထက် ၇ ဆလောက်ကို ပိုများနေတာပါ။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ အဝလွန်နေတဲ့ လေဒီလေးတွေဟာ အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါ သားအိမ်ကင်ဆာ ခံစားရနိုင်ခြေက ပုံမှန်ထက် ပိုများနေတတ်ပါတယ်။
ရှိသင့်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ထက် ပိုများနေသူတွေမှာ ပုံမှန် ကိုယ်အလေးချိန်ရှိသူတွေထက် အစာရေမျိုကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေ ၂ ဆကနေ ၄ ဆ အထိ ပိုများနေပါတယ်။ အစာရေမျိုနံရံကင်ဆာတွေကိုလည်း ခံစားရနိုင်ပါသေးတယ်။
အဝလွန်တဲ့သူတွေ၊ ရှိသင့်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ထက် ပိုများနေသူတွေဟာ အစာအိမ် အထက်ပိုင်း ကင်ဆာခံစားနိုင်ခြေက ပုံမှန်ထက် ၂ ဆ ပိုများနေပါတယ်။
အဝလွန်သူတွေဟာ ပုံမှန် ကိုယ်အလေးချိန် ရှိသူတွေထက် အသည်းကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေ ၂ ဆလောက်ပိုများနေပါတယ်။ အဝလွန်ရင် အသည်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေများတာက အမျိုးသားရော၊ အမျိုးသမီးမှာပါ အတူတူပါပဲ။
အဝလွန်တဲ့အခါ သွေးတိုးက အလွယ်တကူ ဝင်လာပါမယ်။ သွေးတိုးတာရဲ့ နောက်ဆက်တွဲက ကျောက်ကပ် ပျက်စီးပါတယ်။ ဒီလိုကနေ အချိန်ကြာလာတဲ့အခါ ကျောက်ကပ် ကင်ဆာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
အဝလွန်နေသူတွေဟာ ပုံမှန် ကိုယ်အလေးချိန် ရှိသူတွေထက် ကျောက်ကပ်ကင်ဆာ ခံစားရနိုင်ခြေ ၂ ဆလောက် ပိုများနေတာကြောင့် သတိထားစေချင်ပါတယ်။
သွေးကင်ဆာက ဝတာနဲ့ ဆိုင်လို့လား မျိုးရိုးကြောင့် မဟုတ်ဘူးလားဆိုရင်တော့ အကြောင်းအရင်း ၂ မျိုးစလုံးကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဝလွန်​နေတဲ့သူတွေမှာ သွေးကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေက ပုံမှန်ထက် ၁၀ ဆ ကနေ အဆ ၂၀ လောက်အထိ ပိုများနေပါတယ်။
အဝလွန်တာဟာ ဦးနှောက် နဲ့ ပင်မအာရုံကြောမကြီးတွေမှာ ကင်ဆာကျိတ် ဖြစ်ပေါ်ခံစားရနိုင်ခြေ များစေပါတယ်။ အဝလွန်နေသူတွေမှာ ဦးနှောက် နဲ့ ပင်မ အာရုံကြောမှာ အကျိတ်ဖြစ်နိုင်ခြေက ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိကို ရှိနေပါတယ်။
ပုံမှန် ကိုယ်အလေးချိန် ရှိသူတွေထက် အဝလွန်နေသူတွေမှာ ပန်ကရိယ ကင်ဆာ ခံစားရနိုင်ခြေက ၁.၅ ဆ လောက်ပိုများနေပါတယ်။
အူမကြီးကင်ဆာက အမိုးသားတွမှာ ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများတယ်ဆိုပေမယ့် ရှိသင့်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ထက် ပိုများနေမယ်၊ အဝလွန်နေမယ်ဆိုရင်တော့ အူမကြီး ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေက ပုံမှန်ထက် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ပိုများနေပါတယ်။
သည်းခြေအိတ်ကင်ဆာက ရှိနေတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ပေါ် လိုက်ပြီး ခံစားရနိုင်ခြေ ကွာခြားပါတယ်။ လူတစ်ယောက်က ရှိသင့်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ထက် ပိုနေမယ်ဆိုရင် သည်းခြေအိတ် ကင်ဆာ ခံစားရနိုင်ခြေက သာမန်ထက် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ အဝလွန်နေမယ်ဆိုရင် သည်းခြေအိတ်ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေက ပုံမှန်ထက် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ပိုများနေပါတယ်။
ဒီကင်ဆာတွေအပြင် အဝလွန်တာက ရင်သားကင်ဆာ၊ သားဥအိမ်ကင်ဆာ၊ သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာ ခံစားရနိုင်ခြေတွေကိုလည်း တိုးစေပါတယ်။
Obesity and Cancer https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/obesity/obesity-fact-sheet Accessed Date6October 2020
How does obesity cause cancer? https://www.mdanderson.org/publications/focused-on-health/how-does-obesity-cause-cancer.h27Z1591413.html Accessed Date6October 2020